Qatar Airways | eTurboNews | I-TravelIndustry News
I-Qatar Airways kanye ne-Malaysia Airlines: Isigaba esisha esilandelayo se-Roadmap
IMalaysia Airlines yethula indiza yayo yokuqala engami isuka eKuala Lumpur iya eDoha, kanti iQatar Airways iyathokoza. I-Qatar...
ISaudi Arabia ngaphandle kombuzo ikwazile ukuhola embonini yezokuvakasha nezokuvakasha emhlabeni wonke ngesikhathi ...
Ijaji laseBrithani libhekene necala le-Qatar Airways ecaleni le-Airbus
Esimeni esikhulu sokubuyisela emuva iQatar Airways, ijaji leNkantolo eNkulu yaseLondon lisichithile isicelo senkampani yezindiza sokuphoqa abakhi bezindiza base-Europe...
Uthandana noPutin? Air Serbia, Turkish Airlines, Emirates, kanye Etihad
AmaRussia aya kanjani e-United States nasemhlabeni wonke? Khohlwa i-Aeroflot, kodwa ushintsha e-Istanbul, ...
I-Seychelles Open Day e-Rome idonsa ukunaka kwe-ejensi yezokuvakasha kulo lonke elase-Italy
Ngomhla zingama-22 kuJanuwari, ihhovisi elimele iTourism Seychelles e-Italy lihlanganyele nenkampani yezokuvakasha i-Evolution Travel emcimbini wosuku olugcwele obusenkabeni yedolobha lase-Rome e-Hotel Londra & Cargill ukuze kuqeqeshwe abasebenzeli bezokuvakasha benethiwekhi nabaxhumanisi bezokuvakasha endaweni oya kuyo.
I-Boeing yethula i-777-8 Freighter entsha
I-Qatar Airways izoba yikhasimende lokwethula i-777-8 Freighter eline-oda eliqinile lamajethi angama-34 kanye nezinketho zezinye ezingu-16, ukuthengwa okuphelele okungabiza ngaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-20 ngezintengo zamanje zohlu kanye nokuzibophezela kwempahla enkulu kunazo zonke emlandweni we-Boeing ngenani.
Engxabanweni ekhulayo yokumiswa kwendiza i-A350, i-Qatar Airways iyekile ukwamukela ukulethwa kwendiza enomzimba omkhulu isuka ku-Airbus kuze kube yilapho inkinga yokucekelwa phansi kwezindawo ezingaphandle isixazululiwe.
Izindiza ezintsha eziya e-Kano nase-Port Harcourt e-Nigeria nge-Qatar Airways
I-Kano kanye nePort Harcourt zizoba yisango lesikhombisa nesishiyagalombili elisha lase-Afrika elethulwe yi-Qatar Airways kusukela kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19.
I-Qatar Airways ifuna i-Airbus iyikhokhe amaRandi ayizigidi ezingu-618 ngamaphutha e-A350
Ngenxa yenkinga eqhubekayo ngemikhumbi yayo ye-A350, I-Qatar Airways isiqalile ukukhipha indiza yayo ene-mothballed A380 super-jumbo njengoba ilungiselela ukubhekana neNdebe Yomhlaba yebhola.
I-Qatar Airways iyisa i-Airbus eNkantolo eNkulu eLondon
Isimo esisheshayo sokuwohloka kwendawo sibe nomthelela omubi ezindizeni ze-Qatar Airways' Airbus A350.
Izindiza ezingami kusukela e-Doha kuya e-Sofia, Bulgaria nge-Qatar Airways manje
Izindiza ezingami ezibuyiselwe e-Qatar Airways zizokwenza kube lula nakakhulu kubahambi abavela emhlabeni wonke ukuvakashela e-Bulgaria - izwe eliyingqayizivele ngempela elinokuthile elingakunikeza wonke umuntu.
Ukudla okuhle manje sekubuyile ezindizeni zeQatar Airways eziya eLondon naseParis
Kusukela kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19, inkampani yezindiza isebenzise izinyathelo ezinqala zezempilo nezokuphepha ezindizeni zayo ngomzamo wokunciphisa ukuxhumana phakathi kwezisebenzi nabagibeli.
I-Qatar Airways yethula izindiza ezintsha ze-Odesa ne-Tashkent ngamaholide
I-Qatar Airways iyaqhubeka nokuthuthukisa uhlelo lwayo kanye nenethiwekhi ngokwandisa amaza ezindaweni eziningi ezidumile emhlabeni wonke kuyilapho isebenzisa izinyathelo zokuphepha eziqinile phansi nasemoyeni, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokuphila kahle kwabagibeli nabasebenzi.
Njengoba lena kuzoba eyokuqala ngqa ye-FIFA Arab Cup, i-Qatar izokhombisa okuhamba phambili kwebhola lezinyawo lase-pan-Arab.
I-LATAM Airlines Group Now Files Plan Yokuhlela Kabusha Iphume Esahlukweni 11
I-LATAM Airlines Group SA kanye nabasebenzisana nayo eBrazil, eChile, Colombia, Ecuador, Peru, nase-United States namuhla bamemezele ukufakwa Kohlelo Lokuhlela Kabusha ("Uhlelo"), olubonisa indlela eya phambili yokuthi iqembu liphume eSahlukweni 11. ngokuhambisana nomthetho wase-US nowaseChile. Lolu hlelo luhambisana neSivumelwano Sokuseka Kabusha ("RSA") neQembu Le-Parent Ad Hoc, okuyiqembu elikhulu labakweletwayo elingavikelekile kulezi zimo zeSahluko 11, kanye nabanye babanikazi bamasheya be-LATAM.
I-Qatar Airways Imisa Ngokushesha Izindiza Ezivela Emazweni Amahlanu ase-Afrika
Ngokushintshashintsha okusha kwe-COVID-19 Omicron eSouthern Africa, iQatar Airways ngeke isamukela abagibeli abavela emazweni amahlanu aseNingizimu Afrika kunethiwekhi yayo yomhlaba wonke ngokushesha.
I-Almaty iyaqhubeka nokukhula ekudumeni ngabagibeli beQatar Airways ngazo zombili izinjongo zebhizinisi nezokuzijabulisa, iheha abahambi abafisa ukujabulela isiko layo elicebile, ukudla kanye nendawo yemvelo.
Indiza entsha ye-Boeing 777-9 indizela e-Doha International Airport
Indiza, okulindeleke ukuthi ijoyine umkhumbi we-Qatar Airways esikhathini esizayo esiseduze, izoba indiza yezinjini ezimbili enkulu kunazo zonke futhi esebenza kahle kunawo wonke emhlabeni, ilethe ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi ngamaphesenti angama-20 kanye nokukhipha umoya kunezindiza zesizukulwane sangaphambilini.
Inkampani yezindiza yokuqala ye-Qatar Airways ukujoyina inkundla ye-IATA CO2NNECT
Lo msebenzi wokulinga wethulwa emizileni emine (4), ngezinhlelo zokunwebela kulo lonke uxhaxha lwempahla ethwala impahla ezindaweni ezingaphezu kwamashumi ayisithupha (60) kanye nezindawo zabagibeli ezingaphezu kwekhulu namashumi amane (140) emhlabeni jikelele.
I-Qatar Airways ibuyisa ama-A380 ayo esizini yasebusika
Ukumiswa kwakamuva kwemikhumbi ye-Airbus A19 engu-350 ngumlawuli ngenxa yenkinga eqhubekayo ehlobene nokuwohloka okusheshayo kwendawo ngaphansi kukapende kubangele isinqumo esimanqikanqika sokubuyisela i-A380 ekusebenzeni.
Izindiza ze-Moscow Sheremetyevo Airport kuQatar Airways manje
Ngenethiwekhi ekhulayo ye-Qatar Airways, inkampani yezindiza inganikeza abagibeli abavela e-Sheremetyevo ukuxhumana okungenamthungo baye ezindaweni ezidumile e-Asia, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi naseMelika, kanye nezindawo ezihamba phambili zokubalekela ilanga njengeMaldives, Seychelles neZanzibar ngokusebenzisa 'Isikhumulo Sezindiza Esingcono Kakhulu Emhlabeni Ka-2021', I-Hamad International Airport (HIA).
Izindiza ezingami eKigali eziya eDoha manje ngeQatar Airways neRwandAir isivumelwano esisha secodeshare
Izindiza ezintsha zeRwandAir iKigali - iDoha ezingami kusukela ngoDisemba zizohlinzeka ngohambo olungenamthungo oluxhuma i-Afrika emhlabeni.
I-Etihad Airways, iJazeera Airways, iJetstar, iQantas, iQatar Airways neRoyal Jordanian, bazosebenzisa i-IATA Travel Pass ngokukhishwa okunezigaba kumanethiwekhi ezindiza.
Ezokuvakasha Seychelles neQatar Airways Yabelana ngentuthuko entsha neSwitzerland Media
AbakwaTourism Seychelles nozakwethu bezindiza iQatar Airways baqinise imizamo yabo yokuqinisa ukubonakala kwendawo okuya kuyo eSwitzerland ngokuhlela umhlangano nochwepheshe bezokuvakasha, abezindaba kanye nabemboni eZurich ngoLwesine, Septhemba 23.
Izindiza zakwaSharm El-Sheikh, Luxor kanye neCairo kuQatar Airways manje
Ukwanda kwezinsizakalo eGibhithe kuzoqhubeka nokunikeza abalandeli bebhola laseGibhithe izinketho eziningi zokuhambela i-FIFA Arab Cup 2021 eQatar, bathokozele ukwamukelwa okuhle kakhulu kwamaQatar futhi balandele iqembu labo lesizwe mathupha.
Ukuqaliswa kabusha kwezinsizakalo kuzokwenza abagibeli abahamba ngendiza besuka noma beya e-Medina bakwazi ukujabulela ukuxhumana okungenazihibe ezindaweni ezingaphezu kwe-140 zenethiwekhi yomhlaba wonke yenkampani yezindiza e-Asia, Afrika, Europe kanye naseMelika ngokusebenzisa Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe Sase-Doha Hamad.
I-Qatar Airways: Ukulahleka kokusebenza phansi, amaholo enyuka ngo-2020/21
IQatar Airways Group yenze inqubekelaphambili ebonakalayo ekufisweni kwayo ukwakha amasu amasha okusebenzisana namabhanoyi amakhulu, okubandakanya iAmerican Airlines, Air Canada, Alaska Airlines kanye neChina Southern Airlines.
IKazakhstan iyipharadesi lomvakashi, elinamathafa ahlukahluka kusuka ezintabeni ezisibekelwe yiqhwa kuya ezingwadule ezinkulu, imihosha enamadwala, amahlathi e-coniferous, kanye nezilwandle ezingathintwa zemifula. Izivakashi zingababaza nezimpawu zomlando ezibandakanya imibhoshongo ephuzi ngokukhazimulayo yeZenkov Cathedral edumile e-Almaty.
I-Illegal Wildlife Trade Assessment (IWT) Assessment yathuthukiswa yi-International Air Transport Association (IATA), ngokwesekwa yi-ROUTES, njengengxenye yohlelo lwe-IEnvA - IATA lokuphathwa kwemvelo kanye nokuhlola izinkampani zezindiza. Ukuthobelana Nezimiso Ze-IWT I-IEnvA Nemikhuba Enconyiwe (ESARPs) kuvumela abasayini bezindiza ku-United for Wildlife Buckingham Palace Declaration ukuthi babonise ukuthi basebenzise Izibophelelo ezifanele ngaphakathi Kwesimemezelo.
Ilungu elisha leQatar Airways le-ICAO Global Sustainable Aviation Coalition
Umfelandawonye uhlanganisa ababambiqhaza abasebenza ngezihloko eziningi ezihlobene nokundiza okusimeme, kufaka phakathi izibaseli zezindiza eziqhubekayo, ingqalasizinda, ukusebenza, nobuchwepheshe, futhi kubheka abahleli bezindlela lapho bekhomba amalungu amasha angaba khona.
Indiza yokuqala yabagibeli bamazwe aphesheya iphuma esikhumulweni sezindiza iKabul
AmaQatari namaqembu ezobuchwepheshe aseTurkey asizile ukubuyisa ukusebenza esikhumulweni sezindiza, esonakele ngesikhathi kukhishwa isiphithiphithi samashumi ezinkulungwane zabantu ukuhlangabezana nomnqamulajuqu wokuhoxiswa kwamasosha aseMelika ngo-Agasti 31.
IPhuket ibona isigaba sokuvulwa kabusha kwezindawo eThailand selokhu kwaqala i-COVID-19 isebenzisa uhlelo lwezokuvakasha lweSandbox njengesiqondisi sayo.
USimon Newton-Smith useke waba nezikhundla ezibalulekile zobuholi neVirgin Atlantic Airways kanye neQatar Airways.
Ukundizela eZambia noma eZimbabwe kuvele kwashesha kakhulu futhi kwaba lula
Ibhodi Lezokuvakasha lase-Afrika lishayela ihlombe i-Qatar Airways ngokuzibophezela kwayo e-Afrika futhi iyakwamukela izindiza ezintsha eziya e-Doha eziya e-Lusaka nase-Harare. Manje sekulula kakhulu futhi kuyashesha kubagibeli base-America, Europe, India, Asia noma Middle East ukuxhuma nge-Doha, Qatar ukuze bafinyelele kokubili eZambia nase-ZImbabwe.
I-Qatar Airways ilindele ukuthi i-Airbus isungule umsuka wayo futhi ilungise unomphela isimo esikhona ukuze yanelise iQatar Airways nomlawuli wethu ngaphambi kokuletha enye indiza i-A350.
I-Phuket Sandbox: Ungasihlanganisi Nayo Yonke iThailand
Ekhuluma engqungqutheleni yasePhuket Sandbox Summit ebibanjelwe eLaguna Phuket, uSihlalo oPhethe weBanyan Tree Group, uKP Ho, ucele abenzi bezinqubomgomo eYurophu nasemhlabeni jikelele ukuthi basekele iPhuket njengendawo ehlukile "eluhlaza".
I-Afrika iyimakethe ebaluleke kakhulu yeQatar Airways futhi lobu budlelwano bamuva buzosiza ukusekela ukubuyiswa kohambo lwezindiza lwamazwe omhlaba futhi buhlinzekele ngokuxhuma okungenakulinganiswa kuya nokubuya ezindaweni eziningi ezintsha zase-Afrika.
Ezokuvakasha Seychelles “Umbukiso Womgwaqo Wonyaka WaseNyakatho Melika” Uhamba Ngokusobala
ITourism Seychelles bekufanele yenze izinto ngendlela ehlukile kulo nyaka ngombukiso wayo wonyaka we-"North America Annual Roadshow" ngenxa ye-COVID-19. Ngemva kokungabikho kweminyaka emi-2, umbukiso wemigwaqo, ovame ukuya emadolobheni angu-4 aseMelika, wenziwa cishe ngoLwesithathu, Juni 25, futhi ngemva kokuphumelela kwawo, umcimbi wesibili uzoba ngoLwesithathu, Agasti 18, 2021.
Ukudluliselwa eDoha, e-Abu Dhabi, e-Dubai: Ukukhetha kwabagibeli bezindiza kucacile
I-Qatar nesikhungo sayo sesikhumulo sezindiza i-Doha Hamad International idlule ezikhathini ezingenakwenzeka ngesikhathi sokuvinjwa yi-UAE, Saudi Arabia, Egypt, kanye neBahrhain. Ngemali eningi kanye nezikhuthazo zezindiza, isevisi kanye nokunethezeka i-Doha ikwazile ukwenza okungenakwenzeka - isitayela seQatar.
AirlinesAirportizinhlanganoIzindaba Ezintsha ZokuhambaUkuhamba NgebhizinisiIzwe | IsifundaNewsletterQatarUbuchwephesheEzokuvakashaTransportationIzindaba Zocingo LokuhambaIzindaba Ezihlukahlukene
I-Qatar Airways ijoyina i-IATA's Turbulence Aware Platform
I-Qatar Airways bekuyinkampani yezindiza yokuqala eMpumalanga Ephakathi ukubamba iqhaza kuhlelo lweTurbulence Aware ngenkathi yethulwa njengomsebenzi wokuhlola ngoDisemba 2018.
AirlinesAirportIzindaba Ezintsha ZokuhambaUkuhamba NgebhizinisiIzwe | IsifundaImpiloNewsletterQatarUkwakha kabushaUbuchwephesheEzokuvakashaTransportationIzimfihlo ZokuhambaIzindaba Zocingo LokuhambaIzindaba Ezihlukahlukene
I-Qatar Airways iba yinkampani yezindiza yokuqala ukuhlanganisa izitifiketi zokugoma kuhlelo lokusebenza lweselula lwe-'Digital Passport '.